Ukunikezwa kwamandla we-ATX
Uchungechunge olungangeni imvula
I-adaptha yebhethri ye-lead-acid
I-adaptha yebhethri yeLithium
Igcina i-adaptha engashintsheka
I-adaptha yenani lodonga
Kungani i-adaptha yamandla ishisa ngesikhathi sokusetshenziswa nokuthi ungabhekana kanjani nayo?
Lapho sisebenzisa i-laptop, singathola ukuthi i-adaptha yamandla iyashiswa ngenkathi isetshenziswa, ikakhulukazi lapho ishaja futhi isebenzisa ehlobo elishisayo. Eqinisweni, lokhu kuyinto ejwayelekile ngoba Isebenzisa amandla ngenkathi kuguqulwa amandla kagesi, futhi ingxenye yawo iguqulwa ibe amandla okushisa futhi ikhiphe. Njengo ...
Uhlolojikelele lwemakethe yokunikezwa kwamandla kwePC namathrendi entuthuko okuzayo
Ukunikezwa kwamandla kwe-PC yisiguquli sikagesi esihlinzeka ngamandla ekunikezelweni kwamandla. Ngokuqondile, amandla we-PC aguqula amandla we-AC abe ngamandla we-DC alawulwa ngamandla amancane wezinto zangaphakathi zekhompyutha. Amakhompyutha omuntu siqu wanamuhla ngokuvamile asebenzisa ukunikezwa kwamandla emodi yokushintsha. Som ...
Uyini umehluko phakathi kokushaja okusheshayo kwe-PD ne-QC ukushaja okusheshayo? Ngabe lezi zinhlobo ezimbili zokushaja okusheshayo zingahambisana yini?
Yize ubuchwepheshe bokushaja okusheshayo buhlukahlukene, obubaluleke kakhulu ukushaja okusheshayo kwe-PD ekamu le-Apple ne-QC ukushaja okusheshayo enkanjini ye-Android. I-QC3.0 yiprothokholi yokushaja okusheshayo yesizukulwane sesithathu eyethulwe yiQualcomm. Ishaja yeQC3.0 ishaja ifakwe iQualcomm's Quick Ch ...
Ngabe ukunikezwa kukagesi kwe-SFX kuzothatha indawo yokunikezwa kwamandla we-ATX?
kufanele kukhethwe kanjani ukuhanjiswa kwamandla?
Ishaja zeGaN ziyeza?
Ishaja ekahle kufanele ibe nezindawo zokuxhumana eziningi namandla aphezulu, anele ukushaja amadivayisi amaningi ngasikhathi sinye. Amafoni omakhalekhukhwini, amathebulethi, nezincwadi zokubhala konke kuyatholakala, futhi usayizi uyafana neshaja ejwayelekile echwebeni elilodwa. Ngale ndlela, noma ngabe usendaweni ehleliwe noma ukude nekhaya, i-cha eyodwa ...
Isilinganiso sokusebenza / sentengo yindikimba yaphakade yokuwina isabelo semakethe
Intengo yomkhiqizo, inkomba yokusebenza, umphumela womkhiqizo nempilo yesevisi zihlala ziyizinkinga ezikhathazeka kakhulu kubasebenzisi. Uma ubheka abahlinzeki bamandla abaningana abadumile ekhaya naphesheya nakwabahlinzeki bamandla abaphezulu emhlabeni, babhekene nengcindezi efanayo, okungukuthi, ukuncintisana kwentengo, ukuvumelana kokusebenza ...
Ukuthuthukiswa okusheshayo kwezobuchwepheshe obuhlukahlukene
Imishini yokuphakelwa kwamandla ngumkhiqizo onokuqukethwe kobuchwepheshe obuphakeme, ulwazi olubanzi nokuvuselelwa okusheshayo. Manje sekusetshenziswe kabanzi embonini, emandleni, ezokuhamba, imininingwane, ezokundiza, i-aerospace, ukuhambisa, ukuvikela izwe, ezemfundo, amasiko neminye imikhakha. Esikhathini semininingwane, okungenhla-m ...
Ake sibone ukuthi yini okufanele siyinake lapho sisebenzisa amandla we-ATX?
Imikhiqizo eminingi kufanele ibe nezinto eziningi zokuyinaka lapho isetshenziswa, ngoba sidinga ukuqinisekisa ukuthi azikho izinkinga enqubweni yokusetshenziswa, engaqinisekisa kangcono ikhwalithi yemikhiqizo futhi iqinisekise ukusebenza kahle komsebenzi. Vele, indlela eyiyo yokuyisebenzisa ibaluleke kakhulu, ngakho-ke si ...
Ukuthuthuka kwemboni yamandla nobuchwepheshe bamandla emhlabeni
Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bamandla kagesi kuqhuba ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bamandla, futhi ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bamandla kukhuthaza ngempumelelo ukuthuthukiswa kwemboni yamandla. Kuze kube manje, ukunikezwa kukagesi sekuyinto ebaluleke kakhulu yezobuchwepheshe kanye nomkhakha, futhi isetshenziswa kabanzi kuma-ind
ingabe i-adaptha yamandla iyashisa ngenkathi isetshenziswa nokuthi ungabhekana kanjani ne ...
Ikheli: Isakhiwo B, ipaki lezimboni iTesitai, iLiyuhe, iGongming, iGuangming, iShenzhen
© Copyright - 2010-2021 : All Rights Reserved. Okufakiwe Products - Ibalazwe - Hambayo Site
Computer Power Supply , Computer Psu 300w, Smps Amandla Supply , 250W PSU , Okugcwele Voltage ATX Amandla Supply , ATX Amandla Supply ,